सामाजिक मिडिया विज्ञापन र सानो व्यापार | Martech Zone
सामाजिक मिडिया विज्ञापन र सानो व्यापार
सोमबार, जनवरी 18, 2016 सोमबार, जनवरी 1, 2018 लोरेन बल
सामाजिक मिडिया निःशुल्क छैन।
हालसालैका वर्षहरूमा फेसबुक, लिंक्डइन र ट्वीटर सबैले उनीहरूको विज्ञापनको प्रस्ताव राखिदिए। प्रत्येक चोटि जब म फेसबुकमा लग इन गर्छु यो स्पष्ट हुन्छ कि ठूला उपभोक्ता उत्पादन कम्पनीहरूले यी उपकरणहरूको राम्रो प्रयोग गरिरहेको छ। म अधिक प्रश्न गर्न चाहान्छु भन्ने प्रश्न के यो छ कि साना व्यवसायहरू विज्ञापन ब्यान्डगागनमा उफ्रँदैछन्? यो विषयहरू मध्ये यो एक हो जुन हामीले यस वर्ष अन्वेषण गर्‍यौं इन्टरनेट मार्केटिंग सर्वेक्षण। हामीले के सिकेका थियौं यहाँ छ।
50०% उत्तरदाताहरूले भने कि तिनीहरूले विगतमा विज्ञापनमा पैसा खर्च गरे वा हाल पैसा खर्च गरिरहेका छन्।
समय र पैसा दुबैमा सोशल मिडिया विज्ञापनको एक धेरै कम प्रारम्भिक लगानी हो। Little 5.00 को रूप मा केहि भन्दा कमको लागि र तपाइँको समयको केहि मिनेटहरू, तपाइँले पोष्ट बढाउन सयौं वा हजारौं नयाँ सम्भावनाहरू सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए प्रारम्भिक बम्प पछि के हामी अरू कम्पनीहरूलाई २०१ in मा एक पटक प्रयास गर्न तयार देख्नेछौं? यस्तो लाग्दैन, केवल २%% ले संकेत गरे कि उनीहरूको योजना अर्को वर्ष खर्च गर्ने छ।
ती विज्ञापन कहाँ छन्?
धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जहाँ सानो व्यवसाय मालिकहरू तिनीहरूको पैसा खर्च गरिरहेका छन्? अहिले फेसबुक स्पष्ट विजेता हो। यो चाखलाग्दो छ कि कम्पनीहरूले गुगलमा फेर्ने भन्दा दुई गुणा बढी फेसबुक फेर्दछन्। लिंक्डइनलाई Google भन्दा धेरै पटक पनि छनौट गरिन्छ।
सामाजिक मिडिया विज्ञापन कार्यक्रमको लोकप्रियता के हो? यो केही चीजहरू, आराम, प्रयोगको सजिलोता, दर्शक विभाजन र किफायतीको लागि फोडा हुन्छ।
व्यापार मालिकहरू जे भए पनि फेसबुक र लिंक्डइनमा समय खर्च गर्दैछन्। उनीहरूले पहिले नै मानक ब्लग पोष्टहरूमा सामग्री सिर्जना गर्नका लागि सिर्जना गरिरहेका छन, त्यसैले पोष्ट बढाउँदा उनीहरू पहिलेदेखि गरिरहेको कुराको प्राकृतिक विस्तार हो।
एक सरल र प्रभावी अभियान सेट अप गर्न केहि मिनेट लाग्छ। केहि क्लिकहरूमा, एक व्यवसाय मालिकले अवस्थित सामग्रीको टुक्रा लाई बढावा दिन सक्छ। व्यापार ड्यासबोर्डले केहि परिष्कृत विज्ञापन योजनाको लागि अनुमति दिन्छ यदि तपाईं अधिक विशिष्ट हुन चाहानुहुन्छ, तर त्यहाँ कुञ्जी शब्दहरू लिने जटिल प्रक्रिया छैन, र आशा छ कि तपाईंसँग सही छ। र तपाईं एक स्पॉटको लागि अन्य व्यवसायको बिरुद्द बिडिंग गर्दै हुनुहुन्न। जबकि फेसबुक संग केहि कडा कडा दिशानिर्देश छ के विज्ञापन मा देखा पर्न सक्छ, यदि तपाइँ ग्राफिक बनाउन को लागी तिनीहरुको नियमहरु अनुसरण, तपाइँ एक धेरै प्रभावी विज्ञापन छ।
फेसबुकलाई उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा धेरै थाहा छ, सम्बन्धको स्थिति र क्यारियर विकल्पहरू देखि लिएर उनीहरूले मनोरञ्जनका प्रकारहरूमा। यी सबै जानकारी एक विज्ञापनदाता को लागी एक विज्ञापन को लागी एक उचित दर्शक निर्माण को लागी उपलब्ध छ। लिंक्डइनको साथ तपाईले उद्योग, रोजगार शीर्षक, कम्पनीको आकार वा खास कम्पनियहरु द्वारा विज्ञापन लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। दुबै केसहरूमा तपाईले आफ्नो सन्देशहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिको अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं थोरै $ 5.00 को लागि सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कम लागतमा सुरु गर्न को लागी सजिलैसँग बुझ्न सजिलो छ किन धेरै व्यवसाय मालिकहरूले उनीहरूको खुट्टामा पानीमा राखेका छन्। लगभग कुनै अन्य मार्केटिंग जस्तै तपाईंसँग स्पष्ट उद्देश्यहरू हुनु आवश्यक छ, तपाईंको आक्रमणको योजना गर्नुहोस्, केही परीक्षणहरू चलाउनुहोस्, नापहरू नाप्नुहोस्, तपाईंको रणनीति समायोजित गर्नुहोस् र फेरि चलाउनुहोस्। दुर्भाग्यवस यस्तो देखिन्छ कि साना व्यवसाय मालिकहरू सीमित परीक्षणको साथ उनीहरूको दृष्टिकोणमा अलि अलि बढी भान भइरहन्छन् र त्यसपछि परीक्षण जारी राख्नुको सट्टा हार दिनुहुन्छ।
सामाजिक विज्ञापन प्रवृत्ति हेर्नुहोस्
यी उपकरणहरू विकास गर्न जारी हुनेछ। तिनीहरूले अधिक व्यापार मालिकहरूले साना सामाजिक विज्ञापन अभियानको साथ प्रयोग गर्ने छन्। अन्तत: केहीले व्यवस्थित दृष्टिकोण विकास गर्नेछ र परिणाम स्वरूप वास्तविक सफलता देख्नेछ। तपाईं त्यस प्रवृत्तिको अगाडि वा पछाडि अन्त्यमा हुन सक्नुहुनेछ तर यदि तपाईं व्यवसायको लागि सोशल मिडियामा हुनहुन्छ भने तपाईंले अन्ततः खेल्न पर्छ।
यदि तपाईं फेसबुक विज्ञापन खोजी गर्न तैयार हुनुहुन्छ भने, हाम्रो गाइड डाउनलोड गर्नुहोस् र आज सुरु गर्नुहोस्।
टैग: दर्शक विभाजनफेसबुक विज्ञापनहरूलिंक गरिएको विज्ञापनट्विटर विज्ञापनहरू
इनबाउन्ड मार्केटिंगको बारेमा # १ उजुरी
टेलीप्रोस्पेक्टि Ow को छ?